» Applications, Operating Systems & E-books
နိုင်ငံအလံ: ကျေးဇူးတင်စကား: 2,764
ဒို့ဗမာ ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို အရမ်းကြိုက်နေတယ်-----> Download
နိုင်ငံအလံ: ကျေးဇူးတင်စကား: 7,571
Sony Vegas Pro 11.0 Build 520 + Patch Vegas Pro 11 overview
Sony Vegas Pro 11.0 Build 520 (32-bit) For Windows Vista and Win7 (32 and/or 64-bit)
Sony Vegas Pro 11.0 Build 521 (64-bit) For Windows Vista and Win7 (64-bit) Quote:
Sony Vegas Pro 11.0 Build 520 (32-bit) Mediafire For Windows Vista and Win7 (32 and/or 64-bit)
Sony Vegas Pro 11.0 နောက်ဆုံးဗားရှင်းလေးကို လိုအပ်တဲ့ မိသားစုဝင်တွေ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ 32-bit Version က 32-bit Windows ကော၊ 64-bit မှာပါ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 64-bit ကတော့ 64-bit windows တခုပဲ အသုံးပြုလို့ ရမှာပါ။ Sony Vegas Pro 11.0 Build 520 ကို Install လုပ်ဖို့ကတော့ - ၁။ ပထမဦးဆုံး မိမိစက်မှာ Sony Vegas Pro ဗားရှင်းအဟောင်းတွေ တင်ထားသူများ ဗားရှင်းအဟောင်းကို Uninstall ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ၂။ ထို့နောက် C:/ >> Program files >> sony ဆိုတဲ့ ဖိုဒါကျန်နေသေးယင် အဲဒါကို ဖျက်ပါ။
HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Sony Creative Software HKEY_LOCAL_MACHINE\_SOFTWARE\_Sony Creative Software
HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Wow6432Node\_Sony Creative Software HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Wow6432Node\_Sony Media Software HKEY_LOCAL_MACHINE\_SOFTWARE\_Wow6432Node\_Sony Creative Software HKEY_LOCAL_MACHINE\_SOFTWARE\_Wow6432Node\_Sony Media Software တကယ်လို့ အဲဒီဖိုဒါတွေ မတွေ့ခဲ့ယင် ဖျက်စရာမလိုပါ။ နောက်တစ်ခု အဲဒီမှာ Sony နဲ့ ပက်သက်တာတွေပဲ ဖျက်ရမှာပါ။ တခြား Sony မဟုတ်တာတွေကို လုံးဝမှားမဖျက်မိစေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဖျက်မိယင် ကိုယ့်စက်မှာ ပြဿနာတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။
၁။ အထက်ပါဟာတွေ ပြီးယင်တော့ Sony Vegas Pro 11.0 Build 520 ကို Install လုပ်ပါ။ Install မလုပ်ခင် Antivirus ၊ AntiSpyware ၊ Firewall ...စတာတွေကို ခနလောက်ပိတ်ထားပါ။ ၂။ Install လုပ်ပြီးသွားယင် Sony Vegas Pro ကို မဖွင့်ပဲ ပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးယင်တော့ ကျွန်တော် အပေါ်မှာ တင်ပေးထားတဲ့ Keygen DI v2.0 ကို Copy လုပ်ပြီး C:\_Program Files\_Sony\_Vegas Pro 11.0 ထဲကို Paste လုပ်ပါ၊ အဲဒီထဲကနေ Keygen ကို Right Click >> Run as Administrator နဲ့ Run ပါ။ ၃။ Keygen ပွင့်လာယင် ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Product Name နေရာမှာ 32-bit တင်ထားယင် Vegas Pro 11.0 (32-bit) Series ၊ 64-bit ကို တင်ထားယင် Vegas Pro 11.0 (64-bit) Series ကို ရွေးပေးပြီး Patch ကို နှိပ်ပါ။ နောက်ပေါ်လာတဲ့နေရာမှာ Vegas Pro 11 ကို ရွေးပြီး Ok ကို နှိပ်ပါ။
၄။ နောက်တစ်ခု ထပ်ပေါ်လာတာမှာ Sony\_Shared Plug-Ins ကို ရွေးပြီး Ok ကို နှိပ်ပါ။ အဲဒါဆို Patch လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ Patch ပြီးယင်တော့ Keygen ထဲက Serial Number နဲ့ Activation/Authentiation Code - ၂ ခုကို Copy လုပ်ထားရပါမယ်။ Copy လုပ်ထားပြီးမှ Keygen ကို ပိတ်ပါ။ အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒါပြီးယင်တော့ အဲဒီထဲက Keygen ကို ဖျက်လို့ရပါပြီ။ ၅။ အဲဒီအချိန်မှာ C:\_ >> Program Files >> Sony >> Shared Plug-Ins >> Audio ထဲကို သွားကြည့်လိုက်ယင် .bak နဲ့ဖိုင်တွေ အများကြီးတွေ့ရပါမယ်။ အဲဒါဆိုယင် Patch လုပ်တာ အောင်မြင်ပါပြီ။ တကယ်လို့ မတွေ့ခဲ့ယင် Patch လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် မအောင်မြင်သေးပါ။ C:\_ >> Program Files >>Sony >> Vegas Pro 11.0 ထဲကို သွားကြည့်ယင်လည်း .bak ဖိုင်တွေ တွေ့ရပါမယ်။ အဲဒါဆိုယင် Patch လုပ်တာ ပြီးပါပြီ။ အဲဒါတွေ ပြီးယင်တော့ Sony Vegas Pro 11 ကို Right Click >> Run as Administrator နဲ့ Run လိုက်ယင် အထက်ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Keygen ကနေ Copy ကူးထားတဲ့ Serial Number ကို ထည့်ပြီး Next ကို နှိပ်ပါ။
နောက်တခု ပေါ်လာတာမှာ Register from another computer ကို ရွေးပြီး Next ကို နှိပ်ပါ။ နောက်တခါ Next ကို ထပ်နှိပ်ပါ။ နောက်တခု ကိုယ့်ရဲ့ အချက်အလက်တွေ ဖြည့်ရမဲ့နေရာမှာ ထည့်ချင်တာတွေထည့်ပြီး (အမှန်ကို မဖြည့်ပါနဲ့) ၊ By Providing this information...etc.. ကို အမှန်ခြစ်ပြီး၊ Next ကို နှိပ်ပါ။ နောက်တခု Internet Shortcut ကို Save မဲ့နေရာမှာ နှစ်သက်ရာနေရာမှာ Save ပြီး Next ကို ဆက်နှိပ်ပါ။ နောက်တခု ပေါ်လာတဲ့ Box မှာ Keygen ကနေ Copy ကူးထားတဲ့ Activation/Authentiation Code ကို ဖြည့်ပြီး Finish ကို နှိပ်ပါ။ အဲဒါဆို Sony Vegas Pro 11 ဟာ ပွင့်လာပြီး။ ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း License နဲ့ Full Version ဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါဆို အားလုံးပြီးပါပြီ။ အဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ...
နိုင်ငံအလံ: ကျေးဇူးတင်စကား: 29
adobe premiere pro 2.0 1. http://ifile.it/69pje37
စုစုပေါင်း 1.09 gb ဖြစ်ပါမယ်။ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်စွာနဲ့လေ့လာနိုင်ကြပါစေ ... အောက်ပါအသင်းဝင်မှ gemini.zaw5687 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သီချင်းနဲ့စာသား တပြေးညီ ပြေးတာကို သုံးချင်လို့ပါ sony vegas / power director / premier pro / သုံးလို့ရပါသလား မရလျင် တစ်ခြား software များကို ညွန်ကြားပေးပါခဗျာ
adobe premiere pro 2.0 portable premiere_pro__portable.rar (58.4 mb)
မိသားစုဝင်တွေ အားလုံး ကျန်းမာ ပျော်ရွှင် အောင်မြင်ကြပါစေ ... လင့်သေနေလို့ ပြန်တင်ပေးနိုင်ရင် တင်ပေးပါလားဗျာ
နိုင်ငံအလံ: ကျေးဇူးတင်စကား: 130
ပို့စ် 100 ခုအတွက် 325 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
adobe premiere pro 2.0 Download Portable
နိုင်ငံအလံ: ကျေးဇူးတင်စကား: 18,686
ပို့စ် 1,042 ခုအတွက် 6,004 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
လင့်တွေ သေနေပြီဆိုလို. - Sony Vegas Pro 13 (64bit) version ကို Mediafire ကနေ တင်လိုက်ပါရစေ။
နိုင်ငံအလံ: ကျေးဇူးတင်စကား: 6
င်္င်္Filmora ကတော့ Video Editing ကို စိတ်ဝင်စားပြီး စသုံးမယ့်သူတွေအတွက် အင်မတန်မှ သင့်တော်တဲ့ software ပါ။သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ windows movie maker ထက် ပိုမိုကောင်းမွန် များပြားပေမယ့် သူ့ရဲ့အသွင်အပြင်ဟာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့မို့ အသုံးပြုရတာလွယ်ကူပါတယ်။ win innwa font ကိုလည်း ထည့်သုံးနိုင်တာမို့ ဗမာလိုရေးလို့လည်း ရပါတယ်။ See You When I See You
Torrent ဘာလဲ Torrent ဘယ်လဲ ??
06-04-2015 01:06 AM
25-08-2013 02:07 PM
portable software များဖန်တီးခြင်း
25-01-2012 11:17 PM
Ware နဲ့ဆုံးသော စကားလုံးများအကြောင်း (Hardware, Software, Spyware and etc…)
27-04-2009 03:31 PM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 08:52 PM